We affirm that we are not liable for any kind of negative consequences of reading the information mentioned on this site.
This is not intended to becomeasubstitute for professional medical advice, diagnosis and treatment. Should you haveamedical condition, please always seekadoctor’s advice without delay.
This is only to allow our readers to make better decisions about their health and care themselves better.
ဤဝက်ဆိုက်တွင် ပါ၀င်သော အကြောင်းအရာများသည် မှတ်သားဖွယ်ရာ စုံလင်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာပေများမှ စုဆောင်းထားခြင်းနှင့်အတူ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသော ဆရာ၀န်များ၏ ရေးသားတည်း ဖြတ်မှုများလည်း ဖြစ်သည်။
ဤဖော်ပြထားသော သတင်းအချက်အလက်များအား ဖတ်ရှုခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မည်သို့သော နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ရလဒ်များကိုမဆို ကျွနု်ပ်တို့မှတာ၀န်မယူပါဟု အတိအလင်းကြေညာအပ်ပါသည်။
ဤဝက်ဆိုက်သည် လူနာများအနေဖြင့် ပြင်ပမှဆေးရုံဆေးခန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်သောဆရာ၀န်များ၏ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ဆေးကုသမှုများအား အစားထိုးရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။ သို့ပါ၍ သင့်တွင် ရောဂါေ၀ဒနာတစ်ခုခု ခံစားရပါက နီးစပ်ရာဆရာ၀န်တစ်ဦးဦးထံမှ ချက်ချင်းဆေးကုသမှု ခံယူပါရန် အကြံပြုသည်။
ဤဝက်ဆိုက်သည် စာဖတ်သူများအား ကျန်းမာပျော်ရွင်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်စေရန်အတွက်သာ ရည်မှန်း၍ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတများကို စုဆောင်းတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Standing on the crossroads of Asia with rich endowments of natural resources, Myanmar (formerly ‘Burma’) used to be one of Asia’s most important economies in the 1960s (OECD, 2014). However, the junta’s decades of foreign sanctions, economic stagnation and self-sufficiency hindered the development of national healthcare network. Consequently, Myanmar used to be the second lowest in both health system performance and mobile density in the world. The majority of its rural population (approximately 70% of the total population of over 51.42 million) are now suffering from limited access to adequate healthcare services.
ructuring initiated from political reforms into democracy during 2000, the new government has recognised the importance of universal access to healthcare (UHC). Here, ICT can act asacatalyst to stimulate Myanmar’s developmental catch-up plans to leapfrog the intermediate stages of the conventional bricks-and-mortar route in other principal industries including health sector. E-health has been proposed to help improve healthcare services asanationwide-accessible tool by overcoming geographical boundaries, and fulfil the health needs of Myanmar inhabitants.
အာရှတိုက်၏ အချက်အချာကျသောနေရာတွင် တည်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အဖိုးတန် သဘာ၀အရင်းအမြစ်သယံဇာတများနှင့် ကြွယ်၀နေသောနိုင်ငံဖြစ်၍ လွန်ခ့ဲသောနှစ်ပေါင်း (၅၀) ခန့်က စီးပွားရေးအရ အရေးပါအောင်မြင်သောနိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံခ့ဲရသည်။ သို့ရာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ အာဏာရှင်အစိုးရလက်အောက်သို့ ကျရောက်ခ့ဲရ သောကြောင့် ကဏ္႑ပေါင်းစုံတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခ့ဲရသည်။ ထို့အပြင် ပြည်ပမှအကူအညီများနှင့် အခွင့်အရေးများကို ပိတ်ဆို့ခံရခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် စောင့်ရှောက်မှုပိုင်းတို့တွင်လည်း အလွန်နိမ့်ကျခ့ဲရသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေစုစုပေါင်း၏ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသော ကျေးလက်တောရွာနေပြည်သူများတွင် လုံလောက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ဗဟုသုတများကို မရရှိကြပေ။
ယခုနှစ်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲလာသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ကျန်းမာစေရမည်ဟူ၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်ချက်များကို အလေးပေးသတိပြုမိလာကြသည်။ ထိုက့ဲသို့ ကျန်းမာရေးကဏ္႑ကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် အထိရောက်ဆုံး အထောက်အပ့ံပေးနိုင်သည်မှာ ခေတ်မီတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက် နည်းပညာများပင်ဖြစ်သည်။ ဤအင်တာနက်နည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ေ၀းလံ၍သွားလာရခက်ခဲသော ဒေသများအပါအ၀င် နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံး လွှမ်းခြုံနိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့်ဗဟုသုတများကို လက်လှမ်းမီမီ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
First Aid Kit ကျန်းမာရေး ဆေးအိတ်
099 67 855 844
Advertisment 11 (About Us)